के हुँदैछ भूकम्पले ढलेका पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य ?::KhojOnline.com
के हुँदैछ भूकम्पले ढलेका पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य ?
भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएसँगै पुरातत्व विभागले केही पुरातात्विक सम्पदाको निर्माण तथा मर्मत कार्य समेत थालेको छ।
पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालका अनुसार विभागले यो वर्ष ८३ वटा स्थानको निर्माण कार्य अघि बढाउने जिम्मा पाएको छ। साथै यी निर्माण कार्य अघि बढाउनको लागि ७८ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने उनले जानकारी दिएका छन्।
यो निर्माण कार्य अघि बढाउनको लागि सँस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगबाट विभागले रकम माग गरिसकेको छ। केही पुरातात्विक धरोहरको भने निर्माण कार्य सुरु भइसकेको दाहाल बताउँछन्। उनका अनुसार भक्तपुरको चाँगुनाराणको मन्दिर निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ। यसको जिम्मा भने एक आईएनजिओलाई लगाएको दाहालले बताए।
त्यस्तै चीन सरकारले निर्माण गरिदिन लागेको हनुमानढोकाको नौतले दरबारको पनि काम अघि बढी सकेको छ। चिनियाँ टोलीले यसको अध्ययनको काम सकिसकेको छ। २०१६ को सुरुवातिदेखि नै यसको निर्माण कार्य अघि बढ्ने दाहालले जानकारी दिए।
बसन्तपुरको नौ तले दरबार र नुवाकोटको सात तले दरबार निर्माणको जिम्मा चीनले लिएको छ। यसको निर्माणमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च चीनले ब्यहोर्ने भएको छ भने निर्माणको समयमा नियमन भने पुरातत्व विभागको रहनेछ।
त्यस्तै ललितपुरको रातो मच्छीन्द्रनाथ र बुंगमतीको आनन्द कुटी बिहार भने श्रीलंका सरकारले बनाइदिने भएको छ। पुनर्निर्माण गर्दा बिश्वसम्पदा सुचीमा परेकालाई प्राथमिकतामा राखेको दाहालले जानकारी दिए। बिश्व सम्पदामा परेका र क्षति भएका धरोहरको निर्माण कार्य यसै वर्ष अघि बढाउने उनले बताए।
बिभागका अनुसार भूकम्पको कारण क्षतिग्रस्त भएका सम्पदामा स्वयम्भु, हनुमानढोका दरबार, पशुपतिनाथ मन्दिर, पाटन दरबार, भक्तपुर दरबार, चाँगुनारायण र बौद्धनाथ हुन्। यी सबैको डिजाइन तयार भइसकेको विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिएका छन्।
तर यी सम्पदाको निर्माण के कसरी गर्ने भन्ने बारेमा भने कार्यविधि अहिलेसम्म बनेको छैन। ‘अब भूकम्प आउँदा ति सम्पदा क्षतिग्रस्त नहुनेगरी कसरी निर्माण गर्ने भन्ने बिषयमा कार्यविधि तयार हुँदैछ’ कुवँरले भने। उनका अनुसार भूकम्पको समयमा क्षतिग्रस्त भएका धरोहर मध्ये ४० प्रतिशतको पुुरातत्व विभागले डिजाइन तयार गरिसकेको छ।
विभागका अनुसार भूकम्पको कारण काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी सम्पदाहरुको क्षति भएको छ। भूकम्पको कारण राजधानीका ४ सय ४४ सम्पदामा असर पुगेको छ। ८३ वटा जगैदेखि ढलेका छन् भने ३९ वटा सम्पदामा आंशिक क्षति पुगेको छ। हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा मात्रै ११ वटा सम्पदा ध्वस्त भएका छन्।
हनुमानढोका दरबारमा रहेको काष्ठमण्डप पुरै ध्वस्त भएको छ। यो धरोहर १२ औ शताब्दी निर्माण गरिएको थियो। एकै रुखले बनेको सम्पदाको रुपमा यसलाई चिनिने गर्दथ्यो। त्यस्तै लिच्छबीकालीन समयमा निर्माण भएको भक्तपुर दरबार स्क्वायर पनि क्षतिग्रस्त भएको छ। भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा ५ वटा सम्पदा ध्वस्त भएका छन् भने १४ वटा आंशिक रुपमा क्षति भएका छन्।
ललितपुरको पाटन दरबार स्क्वायर सातौ शताब्दीमा निर्माण भएको थियो। लिच्छबीकालमा कला सस्कृतिको रुपमा बिकास भएको यो दरबारको हातामा रहेका ६ वटा संरचना ध्वस्त भएका छन् भने २० वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ।
स्वयम्भू २ हजार वर्षअघि निर्माण भएको थियो। वैशाख १२ को भूकम्पको कारण ४ वटा संरचना पुर्ण रुपमा ध्वस्त भएका छन् भने ९ वटा सम्पदामा आंशिक क्षति भएको छ। त्यस्तै हिन्दु धर्माबलम्बीहरुको आस्थाको धरोहर पशुपतिनाथ किराँतहरुले राज्यसञ्चालन गर्ने क्रममा निर्माण भएको थियो। यसमा ६ वटा संरचना पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएको र २१ वटामा आंशिक क्षति पुगेको पुरातत्व विभागले जनाएको छ।
बिश्व सम्पदा सुचिमा परेका स्वयम्भू, हनुमानढोका, पशुपति, पाटन दरबार, भक्तपुर दरबार चाँगुनारायण र बौद्धनाथको निर्माण तथा मर्मतको लागि डिजाइन तयार भइसकेको छ। साथै यि क्षेत्रलाई सबैभन्दा पहिले निर्माण गर्ने गरि प्राथमिकतामा राखेको प्रवक्ता कुँवर बताउँछन्